HEALTH CORNER: 2009
3 comments at 2:33 AM
ဗီတာမင် ဆိုရင် အလိုလိုအားဆေးလုံးတွေကိုပြေးမြင်မိကြမှာပဲ။Vitamin A ကနေ ဇက် အထိပါတယ်ဆိုတာကိုး။အဲဒီလူတွေတွက် နိစ္စဓူဝလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေအကြောင်း ကိုယ် ဘယ်လောက်သိထားလဲဆိုတာလေး သိချင်ရင် အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့် လိုက်ပါ။အဖြေလည်းပါမှာမို့လို့ အဖြေမှန်လည်းတစ်ခါတည်းသိသွားပြီး ဗီတာမင်နဲ့ ပတ် သက်လို့တော်တော်လေးသိသွားနိုင်ပါလ်ိမ့်မယ်။
၁. ဘယ်ထဲမှာ Vitamin C ဓါတ်အမြင့်ဆုံးပါဝင်သလဲ။
၂.ဘယ် ဗီတာမင်ဓါတ်က ရာသီမလာမီဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေလဲ။
၃.ဘယ်အရာက Vitamin A အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အရင်းမြစ် မဟုတ်ဘူးလဲ။
က.cod liver oil
၄.ဘယ်ဗီတာမင် ဓါတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီတစ်ရှုးတွေထဲမှာသိုမှီးမထားနိုင်ဘူးလဲ။
၅.Vitamin C နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်သိထားလဲ။အောက်ဖော်ပြပါတွေမှာ ဘယ်ဟာ ကအချက်အလက်သက်သက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဟာက ကောင်းကျိုးဖြစ်လဲ။
က.ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်အတွက် သာမန်လူ တွေထက် Vitamin C ကို နှစ်ဆလိုအပ်တယ်။
ခ.VitaminC ဟာ သာမန်အအေးမိရောဂါလောက်တော့ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တယ်။
ဂ.ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Vitamin Cတွေသိပ်များနေတာဟာ အခြားသောစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် အနှောက် အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်
၆.ဘယ်အချက်က မှန်ကန်ပါသလဲ။လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Vitamin B ဟာ…
Vitamin B1 ဖြည့်စွက်ဆေးကို ဆိုဒါလိုအက်စစ်အပျော့စားပါတဲ့အရည်တစ်ခုသောက် သုံးနေချိန်မှာ မသောက်သုံးရပါဘူး။
၈.ဘယ်ဗီတာမင်ဓါတ်က ပုံမှန်လိုအပ်တဲ့သွေးခဲစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အနာကျက်လို့ အနာရွတ်ကိုအမြန်ပျောက်စေနိုင်သလဲ။
က.ခွဲစိပ်ခန်းဝင်မယ့်လူနာတွေကို သွေးထွက်မလွန်အောင်လို့ Vitamin K ကိုပေးပါတယ်
ခ.Vitamin K ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို သကြားနဲ့ရော မသောက်ရပါဘူး။
ဂ.Vitamin K ဓါတ်က အရိုးပွရောဂါကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။
ဃ.တချို့သော တွေ့ရှိချက်တွေအရ Vitamin K ဟာ ကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရာ မှာတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုတယ်တဲ့။
Vitamin E ကိုသွေးကျဲစေတဲ့ဓါတ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုတယ်။
၁၁.Vitamin B ဟာ အရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့ဓါတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အုပ်စုသေးလေးတွေလည်း ကွဲနေပါတယ်။အုပ်စုကွဲလေးတွေကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ နေ့စဉ်အာဟာရတွေမှာလိုအပ်တာ ပါပဲ။အဲဒီအုပ်စုကွဲလေးတွေကိုသီးခြားနာမည်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ညီအောင်တွဲပေးပါဦး။
1. Folic Acid 2.Thiamin 3. Riboflavin 4.Nicotinic acid
၁၃.အောက်ပါတို့အနက်က ဘယ်အရာက Vitamin B(၁)အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရင်းအ မြစ်အဟုတ်သလဲ။
Vitamin B2 ကိုဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူ့ကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစားအစာတွေမှာပါတဲ့အနံ့အရသာတစ်မျိုးကနေတဆင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
၁၁.က-၄ ခ-၁ ဂ-၂ ဃ-၃
၁၅ မှတ်ကနေ ၁၉ မှတ်…ကျန်းမာရေးအသိပညာကြွယ်ဝပါတယ်။
၁၁မှတ်ကနေ ၁၅မှတ်..ကျန်းမာရေးအသိသင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သိထားရမှာတွေနည်း နေသေးတယ်။
၀ မှတ်ကနေ ၁၀မှတ်..ကျန်းမာရေးအသိနည်းလွန်းပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုလိုအပ်ချက် တစ်ခုအဖြစ် ကျက်မှတ်ထားလိုက်ပါ။